17 Apr 2019 . 6:56 PM
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက မူးယစ်ရာဇာကြီး ပတ်ဘလိုအက်စ်ကိုးဘား Pablo Escobar ရဲ့ နာမည်က အခုအချိန်အထိ နိုင်ငံတကာမှာ လွှမ်းမိုးထားနေဆဲ။ “The King of Cocaine” လို့ အမည်ပြောင်ရတဲ့ အက်စ်ကိုးဘားဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက မူးယစ်ဆေးဝါးလောကမှာ နေလိုလလို ထင်ရှားခဲ့သူ၊ ရာဇ၀တ်ကောင်တွေထဲမှာ အချမ်းသာဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သူ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အက်စ်ကိုးဘား သေဆုံးတာ (၂၆)နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပေမယ့် သူ့နာမည်ကတော့ အခုအချိန်အထိ မသေသေးဘူး။ မကောင်းတာတွေ အများကြီး ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အက်စ်ကိုးဘားလို လူမျိုးမှာ ကောင်းကွက်လေးတစ်ခုတော့ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ သူဟာ ဘောလုံးအားကစားနည်းကို နှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်နေတာပါပဲ။ အဲဒီအချက်ကြောင့်ပဲ အခု ပီရူးအသင်းကို ကိုင်တွယ်နေတဲ့ နည်းပြ ရီကာဒိုဂါရီကာ Ricardo Gareca ဟာ ဒီနေ့အချိန်အထိ အသက်ရှင်ခွင့် ရခဲ့တာပါ။
အဖြစ်အပျက်ကတော့ ဒီလိုပါ။ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက Medellin မှာ အက်စ်ကိုးဘားတို့ရဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းက တန်ခိုးထွားနေချိန် ၁၉၈၀ ကာလတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ပြိုင်ဘက်က Cali ဒေသအခြေစိုက် မူးယစ်ဂိုဏ်းပါပဲ။ ဒီနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ အားပြိုင်မှုမှာ သွေးမြေကျခဲ့ရတာတွေ၊ အသက်ချင်းထပ်ခဲ့ရတာတွေက အများကြီး။ Cali မှာရှိတဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းဟာ အက်စ်ကိုးဘားရဲ့ မိသားစုကို ဗုံးခွဲပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ လွတ်မြောက်ခဲ့ပေမယ့် အက်စ်ကိုးဘားဘက်က လူတွေ အတော်များများ သေခဲ့လို့ သူက လက်စားချေဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။
လာလီဂါပွဲစဉ်(၂)မှာ မဖြစ်မနေနိုင်ပွဲရှာဖွေရမယ့် ဘာစီလိုနာ
by Ko Kyue .5mins ago